Farmaajo oo rikoor u dhigay madaxdii ka horreysay | KEYDMEDIA ONLINE
Wuxuu dadaal xooggan ku bixinaya in doorashooyinku dib u dhacaan, si uu muddo intaan ka badan uu ugu sii jiro Madaxtooyada.
MUQDISHO, Soomaaliya – Maxamed Cabdullahi Farmaajo, ayaa loo diiwaan galiyay rikoor taban oo la xariira kursi jeceylka iyo sharci ku tumashada, kadib markii uu noqday shaqsiga sanadaha ugu badan ku fadhiya kursiga Madaxtooyada tan iyo burburkii Kacaankii uu hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre.
Farmaajo, wuxuu noqday shaqsiga muddada ugu dheer qaab sharci darro ah u sheegta Madaxweynaha Soomaaliya, kadib Siyaad Barre, wuxuuna ku guuldarreystay inuu maro jidkii ay qaadeen Madaxdii ka horreysay.
4 sano, 8 bilood iyo 10 maalin, ayaa laga joogaa xilligii Farmaajo loo doortay hoggaanka dalka, taas oo ka dhigan in muddada xil-heyntiisa ay raacday 8 bilood iyo 10 maalin, waana muddo sharci darro ah, marka laga shidaal qaato qodobka 91aad, ee dastuurka oo dhigaya in Madaxweynahu xilka heynayo muddo afar (4) sano ah oo ka bilaabata maalinta xilka loo dhaariyo.
Afartii Madaxweyne, ee ka horreysay, ee kala ah Xasan Sheekh Maxamuud, Shariif Sheekh Axmed, Cabdullahi Yuusuf Axmed iyo Cabdiqaasim Salad Xasan, ma jiro mid aan waqti dheeri ah ku darsan, hayeeshee, dhamaantood sifada ay ku joogeen xaafiiska ayaa ka gaddisneyd tan Farmaajo.
Habadaba aan dib u milicsanno waqiga raacay muddo xileedkii Madaxweynayaashii afarta ahaa ee ka horreeyay Farmaajo.
Xasan Sheekh Maxamuud, waxaa Madaxwenaha Soomaaliya loo doortay, 10 September 2012, wuxuuna xilka wareejiyay 16 February 2017, taas oo ka dhigan inuu xilka hayay 4 sano, 5 bilood iyo 6 maalin.
Shariif Sheekh Axmed, waxaa xilka ugu sarreeya dalka loo dhiibay, 31 January 2009, wuxuuna xaafiiska banneeyay 20 August 2012, taas oo la micno ah, inuu jagadaas ku fadhiyay 3 sano, 6 bilood, iyo 20 maalin. Shariif wuxuu heystay muddo xileed Saddex sano ah.
Cabdullahi Yuusuf Axmed, wuxuu xilka Madaxwynaha ku guuleystay 14 October 2004 wuxuuna xilka wareejiyay 29 December 2008, taas oo ka dhigan inuu jagadaas sheeganayay 4 sano, 2 bilood iyo 15 maalin.
Cabdiqaasim Salad Xasan, wuxuu Madaxweynaha dalka noqday, August 27, 2000 wuxuuna xilka banneeyay October 14, 2004, taas oo ka dhigan inuu xilka hayay 4 sano, 1 bil iyo 17 maalin
Hadaba, 8-da bilood iyo 10-ka maalin, ee Farmaajo u raacday muddo xileedkiisii afarta sano ahaa, isla-markaana lagu daro damaciisii muddo kordhinta labada sano ahaa, laguna sii siyaadiyo inuu xilka ugu sarreeya dalka sii sheegan doono inta ay ka dhaceyso doorashada Madaxweynaha, waxaa lagu sifeyn karaa Madaxweynihii kursi jeceyku madax-maray tan iyo Siyaad Barre.
Farmaajo, wuxuu dadaal xooggan ku bixinaya in doorashooyinku dib u dhacaan, si uu muddo intaan ka badan uu ugu sii jiro Madaxtooyada.